နတ်တွေအသုံးပြုတဲ့ Skin Care လား?? (Vaseline petroleum gel) – YANGON STYLE
နတ်တွေအသုံးပြုတဲ့ Skin Care လား?? (Vaseline petroleum gel)
သူ့ရဲ့ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ နယ်ပယ်တစ်ချို့ကို စုံစမ်းကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ နတ်ဆေးဆိုတာ ဒါကိုခေါ်တာလားလို့တောင် တွေးထင်မိလေရဲ့..၊ သူက တခြားမဟုတ် Vaseline petroleum gel လေးပေါ့။ သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကို နားနဲ့မဆန့်အောင် ကြားပြီးသကာလမှာ ကျွန်မအနေနဲ့ Vesaline ကို ကောင်းကောင်း အသုံးပြုဖို့အတွက် တွန်းအားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၁လလောက်ကြာအောင် တခြားသူတွေ ညွှန်းသလို အသုံးပြုခဲ့ပြီး ကျွန်မ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလေးတွေနဲ့ တခြားသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ပေါင်းပြီး‌ေ၀မျှပေးသွားပါမယ်။ လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးပါအုံး။
၁. Vaseline petroleum gel ဟာ မျက်တောင်တွေကို ထူပြီး ရှည်လာအောင် အမှန်တကယ်ကို စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Gel ကို Mascara Brush ဒါမှမဟုတ် လက်ဖျားလေးနဲပဲ ယူပြီး မျက်တောင်မွှေးလေးတွေကို ညစဉ်လိမ်းပေးပါ၊ အကျိုးဆက် တော်တော်သိသာလာပါလိမ့်မယ်။
၂. ကျွန်မတို့ဟာ အပတ်တိုင်း SPA သွားနိုင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီ Vaseline ကို ခြေဖဝါးနဲ့ ခြေခုံတွေကို လိမ်းပေးပါ။ မိမိခြေထောက်တွေ အသားမာတက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖိနပ်ပေါက်တာ နာတာတွေမျိုးဆိုရင် ခြေဖဝါးနဲ့ ခြေခုံကို လိမ်းပြီး ခြေအိတ်စွတ် အိပ်ပါ၊ သင့်ခြေထောက်ကို နူးညံ့သွားစေမှာပါ။
၃. ဒူးမဲသူနဲ့ တထောင်ဆစ်တွေမဲပြီး အသားမာတက်တတ်တဲ့သူတွေဆိုရင် ဒီ Vaseline ကို လိမ်းပေးပါ။ အသားမာတက်တဲ့ ဘယ်နေရာကို မဆိုလိမ်းကျံပေးပါ။ အသားအရေချောမွတ်လာပါလိမ့်မယ်။
၄. နှုတ်ခမ်းကိုလည်း လိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။ အသားအရေခြောက်သွေ့တာ ကြမ်းတမ်းတာ ကွဲတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းညိုမဲနေတာတွေကအစ ပျောက်စေတယ်၊
၇. ရေမွှေးဆွတ်တဲ့အခါ အနံ့ကြာကြာခံအောင် ရေမွှေးဖြန်းမဲ့နေရာကို Vaseline အရင်လိမ်းပေးရင် ရေမွှေးက ပုံမှန်ထက်ကို ကြာကြာလေး အနံ့ခ့ပါတယ်။
၈. ရေမွှေးတင်မက မိတ်ကပ် ကြာကြာအထားခံအောင် လိမ်းပေးချင်လည်းရပါတယ်။ Mositurizer or primer အနေနဲ့လည်း မိတ်ကပ်မလိမ်းခင် လိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။
၉. မိတ်ကပ်တွေ ဖျက်တဲ့အခါလည်း Makeup Remover အနေနဲ့ သုံးလို့ရပါတယ်၊
၁၀. Shaving လုပ်တတ်ရင် After Shaving Cream အနေနဲ့ သုံးပေးလို့ရပါတယ်။
၁၁. နားကပ်မတတ်တာကြာလို့ နားပေါက်ကျဉ်းနေတဲ့အခါမျိုးမှာ Vasaeline ကို နားကပ်အူတိုင်မှာ လိမ်းပြီး နားကပ်တပ်ပေးပါ။ ချောချောမွတ်မွတ်၀င်သွားပါလိမ့်မဘိ။
၁၂. မျက်ခုံးမွှေး ဆွဲတဲ့အခါ ပုံသွင်းပြီး ညီညီညာညာ ဖြစ်စေချင်ရင် Vaseline ကို အနည်းငယ်အပေါ်ကနေ သုတ်လိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။
၁၃. အဝတ်အစားတွေပေါ်မှာ Makeup တွေ ပေကျံပါက Vaseline ကိုအနည်းငယ်ပုံထားလိုက်ပြီး ပြန်လျော်ပေးရင် ကုန်စင်နိုင်ပါတယ်။
၁၄. နှုတ်ခမ်းနီ မဆိုးခင် Vaseline ကို Lip balm အဖြစ်ဆိုးထားပါက သွားပေါ်တွေအထိ မပေအောင် ထိန်းထားပေးပါတယ်။
၁၅. ဆံသားပျက်ဆီးနေသူတွေ ၂ခွဖြစ်နေသူတွေက Vaseline ကို ဆံသားအဖြားလေးတွေကို လိမ်းပေးပြီး Repair လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။
၁၆. ကိုယ်ဝန်ဆောင်တေ ဗိုက်အကြောပြတ်တဲ့အခါ Vasaeline ကို လိမ်းပေးလို့ရပါတယ်တဲ့။
ဒါကတော့ ကျွန်မသိသမျှနဲ့ ကျွန်မ သုံးဖူးသမျှ Vasaeline ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပါ။ သင်ရော Vasaeline Petroleum Jelly အသုံးပြုဖူးလား?? အသုံးပြုဖူးခဲ့ရင်တော့ ကောင်း၊ မကောင်းကို မျှ‌၀ပေးသွားပါအုံးနော်။